Homeसमाचारओझेलमा बाँचेका यी दम्पती ! जसले कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन बनाए….
November 11, 2020 admin समाचार 9223
क्यान्सर रोगी-हरूमा प्रति-रोधी क्षमता विकास गर्न लागि परेका एक जर्मन दम्पतीको प्रयासकै निरन्तरता’ले अहिले कोरोना वि’रूद्धको लडाइँमा महत्व-पूर्ण उपाय निकाल्ने संकेत दिएको छ।
जर्मन बायो टेक्नो-लोजी कम्पनी ‘बायो एन टेक’ले अमेरिकी साझेदार ‘फाइजर’सँग मिलेर कोरोना भाइ’रस वि’रूद्ध बनाएको खोप सफलता उन्मुख देखिएको छ।
सोमबार मात्रै फाइज’रले आफ्नो खोपले कोरोना नियन्त्र’णमा ९० प्रतिशत बढी प्रभाव’कारिता देखाएको घोषणा गरेको थियो। यो घोषणालगत्तै विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमु’खदेखि नवनि-र्वाचित अमेरि’की राष्ट्रपति र संसार’भरका महत्व’पूर्ण व्यक्तिले उत्साह प्रकट गरेका थिए।
वैज्ञानिक हरू, जनस्वास्थ्य अधिकारी हरू र विश्वभरका लगानी कर्तामा समेत यसले खुसी’को लहर फैलाएको छ। एउटा वृहत अध्ययन पछिको प्रारम्भिक तथ्यांकले यो खोपको सम्भावना-युक्त नतिजा देखाएको हो।
दुवै कम्पनी मिलेर कोरोना खोप बनाए लगत्तै व्यापक हिसाबले गरिएको परीक्षण (क्लिनिकल ट्रायल)मा सरिक भएका थिए। यति बेला सफ’लताको पहिलो नतिजा सुना’उने हिसाबले तथ्यांक सार्वजनिक गर्ने मामिलामा फाइजर र बायो एन टेक विश्वकै पहिलो औष’धि उत्पा’दक बनेका छन्।
यी साझे दार कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बाट गम्भी’रता पूर्वक लिइनु पर्ने कुनै पनि समस्या अहिलेसम्म नदे’खिएको उल्लेख गरेका छन्। सम्भवत नोभेम्बर अन्त्यसम्म अमेरि’कामा आक’स्मिक प्रयोगका लागि अनुमति दिइनु पर्ने माग समेत राख्नेछन्।
त्यो भनेको कुनै पनि खो’पका लागि अनुसन्धान र औद्योगिक उत्पादन भन्दा बीचको अवधि हो। आक’स्मिक प्रयोगको अनुम’तिकै बेला यो खोप १६ देखि ८५ वर्षसम्मका मा’निसमा परीक्षण गरिनेछ। औद्यो’गिक उत्पादनपछि भने यो बजारमै आउन थाल्नेछ।
अमेरिका बाट यो अनुमति पाएको खण्ड’मा यही वर्ष पाँच करोड डोज तयार पारि सक्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ। यसबाट अढाइ करोड मानिसमा खोप प्रयोग गर्न स’किनेछ। त्यस’पछि सन् २०२१ मा यो कम्पनीले थप १ अर्ब ३ करोड डोज उत्पादन गर्न सक्नेछ।
यी साझेदार कम्पनीले आफ्नो उत्पादन बाट गम्भीर’ता पूर्वक लिइनु पर्ने कुनै पनि समस्या अहिले सम्म नदेखिएको उल्लेख गरेका छन्। सम्भवत नोभेम्बर अन्त्यसम्म अमेरिकामा आक’स्मिक प्रयो’गका लागि अनुमति दिइनु पर्ने माग समेत राख्नेछन्।
त्यो भनेको कुनै पनि खोपका लागि अनुसन्धान र औद्योगिक उत्पादनभन्दा बीचको अवधि हो। आक’स्मिक प्रयोगको अनुम’तिकै बेला यो खोप १६ देखि ८५ वर्षसम्मका मानिसमा परीक्षण गरिनेछ। औद्योगिक उत्पादनपछि भने यो बजारमै आउन थाल्नेछ।
अमेरिकाबाट यो अनु’मति पाएको खण्डमा यही वर्ष पाँच करोड डोज तयार पारिसक्ने अनुमान कम्पनीले गरेको छ। यसबाट अढाइ करोड मानिसमा खोप प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यस’पछि सन् २०२१ मा यो कम्पनीले थप १ अर्ब ३ करोड डोज उत्पादन गर्न सक्नेछ।
बायो एन टेकका प्रमुख कार्य’कारी हुन् ५५ वर्षीय उगुर साहिन। उनका अभिभावक जर्मनीको कोलोन सहरस्थित फोर्ड कम्पनीको कारखानामा काम गर्थे। उनीहरू टर्कीबाट बसाइ सरेर आएका आप्र’वासी थिए।
उगुरकी ५३ वर्षीया पत्नी ओएज्लाम त्वेरेज पनि कम्पनी’कै बोर्ड सदस्य छिन्। साप्ताहिक अखबार ‘वेट आम जोन्टाग’ले दिएको जानकारी अनुसार यो दम्पती यति बेला जर्मनीकै सर्वाधि’क धनी सय जनाको सूचीमा पर्छन्।
यो जोडीले सन् २००८ मा स्थापना गरेको कम्प’नी बायो एन टेकलाई यतिबेला सेयर बजार ‘नास्दाक’ले २१ अर्ब अमे’रिकी डलर बजार मूल्य आँकेको छ। यो शुक्रबार बेलुकी’को मूल्यांकन हो। जबकि एक वर्ष अघिसम्म पनि यो कम्पनीको बजार मूल्य केबल ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर थियो।
अब यही कम्पनीले विश्वका धेरै जनसंख्या’का लागि कोरोनाविरूद्ध खोप तयार पार्नमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने संकेत देखिएको हो।
‘जस्तोसुकै उपलब्धी हासिल गरे पनि उगुर’को भद्र अनि शालीन व्यक्तित्वमा रत्तिभर फरक आउँदैन। अहिले पनि कतै बिजनेस मिटिङमा जानुपरे उनी जिन्स लगाएर, पछाडि पोके झोला बोकेर अनि उनको चिरपरिचित साइकल हाँ’केरै पुग्छन्,’ बायो एन टेकलाई स्थापनादेखि नै आर्थिक सहयोग गर्दै आएको मिग एजी नामको भेन्चर क्यापिटल फर्मका बोर्ड सदस्य माथियाज कोमायार भन्छन्।
चिकित्साशास्त्र पढेर डाक्टर बन्ने बाल्यकाल देखिको सपना पछ्याउँदै उगुरले कोलोन र दक्षिणपश्चिमी सहर हमबर्गमा रहेका शिक्षण अस्प’तालमा काम गरेका थिए। पढाइका प्रारम्भिक वर्षमै उनले भावी पत्नी त्वेरेजलाई भेटेका थिए।
चिकित्सा अनुसन्धान र क्यान्सर विज्ञानमा उनी हरूको साझा रूचि थियो।त्वेरेज एक टर्किस चिकित्स’ककी छोरी हुन् जसका अभिभावक पनि जर्मनी आएका आप्रवासी थिए। एउटा अख’बारलाई अन्तर्वार्ता दिने क्रममा त्वेरेजले आफू हरूको बिहेको दिन पनि दुवैले एउटा ल्याबको काममा समय दिएको उल्लेख गरेकी थिइन्।
उनीहरूले साथसाथै अनु-सन्धान गरेर क्यान्सर बिरामीका निम्ति प्रतिरोधी प्रणाली विकासबारे खोजी गरे। साथै प्रत्येक ट्युमरको आनुवां’शिक विशेषता पत्ता लगाउने कोशिस गरेका थिए।
सन् २००१ मा यो जोडी मिलेर ‘गानमिड फर्मास्युटिकल्स’ खोले। उनीहरूको व्यावसायी जीवन यहीँ-बाट सुरू भएको थियो। यो औषधि उत्पादक कम्पनीले क्यान्सर’सँग लड्न ‘एन्टी-बडी’ विकास गर्थ्यो। त्यतिबेलै माइन्ज युनि’भर्सिटीमा प्राध्यापक भइ’सकेका उगुरले प्राज्ञिक अनुसन्धान र अध्यापन कहिल्यै छाडेनन्।
उनीहरूलाई अध्ययन, अनुसन्धान र उत्पादनको काममा अघि बढ्न मिग एजी र थोमस एन्ड आन्द्रियास स्त्रुंगमान जस्ता कम्पनीले लगा’नी गरिदिए। यो कम्पनीले सन् २००५ मा आफ्नो औ’षधि उत्पादक कम्पनी ‘हेक्साल’ स्विट्जरल्यान्डको नोभार्तिस कम्पनीलाई बिक्री गरेको थियो।
यसरी थालिएको काम फेरि जापानको एस्टे’लाजलाई सन् २०१६ मा १.४ अर्ब अमेरिकी डलरमा बिक्री गरियो। त्यसअघि सन् २००१ मै दम्पती मिलेर खोलेको गानमिड फर्मास्युटि’कलले सन् २००८ मा अहिलेको कम्पनी बायो एन टेक उभ्याइसकेको थियो।
बायो एन टेक स्था’पनाको मूल उद्देश्य नै क्या’न्सर बिरामी’लाई अझ लाभदायी हुनेगरी फराकिलो दायराका रोग प्रतिरोधात्मक थेरापी सामग्री उत्पादन गर्नु थियो। त्यस्ता उत्पा’दनमध्ये ‘म्यासेन्जर आरएनए’ पनि पर्छ।
यो यस्तो अणु हो जसले प्रोटिनमा एमि’नो एसिडको सही अनुक्रम ‘इन्कोड’ गरिदिन्छ। कोष’हरूमा अनुवांशिक निर्देशनहरू पठाउन यसको उपयोग गरिन्छ। र, यतिबेला कोरोना’विरूद्ध लड्न यही कुरा वरदान साबित हुने देखि’न थालेको छ। रोयटर्स / सेतोपाटी
November 19, 2020 admin समाचार 9349
December 2, 2020 admin समाचार 8510